#BooksForRasul: Inona No Tena Ilain’ireo Azerbaijani Mpiaro Zon’Olombelona Mifonja? Boky · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Aogositra 2014 15:31 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, русский, বাংলা, English
Sary amin'ny pejy voalohan'ny pejy Facebook #BooksForRasul.
Tamin'ny Jolay 2014, nentina halaina am-bavany nandritry ny andro maro nifanesy i Rasul Jafarov, mpikatroka mafàna fo amin'ny fiarovana zon'olombelona ary nosamborina vokatr'izany tao Baku ny 2 Aogositra. Namoaka didy hamonjàna an'i Jafarov 3 volana mialoha ny hitsaràna azy ny Fitsaràna ao amin'ny Distrikan'i Nasimi any Azerbaijan, mandra-piandry ny vokatry ny fanadihadiana lalindalina kokoa amin'ilay vesatra heloka bevava mahabe esaka anenjehana azy. Any amponja no handanian'ilay tanora mpikatroka mafàna fo ny faha-30 tana nahaterahany, ny 17 Aogositra.
Jafarov dia mpikatroka mafàna fo mpiaro zon'olombelona manana ny lazany tokoa ao Azerbaijan, “niasa ho an'ireo gadra noho ny politika mandra-pahatonga azy ho iray amin'izy ireny.” Izy no nanagana sady filohan'ny Human Rights Club (HRC), ONG iray natsangany tamin'ny 2010 ary manana tanjona ny handrakitra ny momba ireo gadra noho ny politika tao Azerbaijan. Noho ny asany tao amin'ny HRC, nibaribary herinandro vitsy nialoha ny fifidianana tamin'ny 2013 ny halehiben'ny famoretana atsiky ny resaka politika tao Azerbaijan. Navitrka ihany koa i Jafarov nandray anjara tamin'ilay fanentanana “Sing for Democracy” (Mihira ho an'ny demaokrasia) (ankehitriny, “Taokanto ho an'ny Demaokrasia”) izay manenjika manaraka ireo fanohintohinana ny fahalalahana maneho hevitra no sady miara-miasa amin'ireo artista mpanohitra voasazy noho ny hafatra politika nataon'izy ireo.
Fikambanana iraisampirenena marobe no niampanga ny fisamborana sy fitànana an'i Jafarov, hatramin'ny fanoherana ny fanampenam-bava ataon'ny governemanta amin'izao fotoana izao an'ireo mpikatroka mafàna fo mpiarozon'olombelona ao amin'ny firenena. Nazavain'ny Panorama, tranonkalam-baovao Armeniana, ny sasany amin'ireo zavatra manahira-tsina ao ambadiky ny fanampenam-bava ataon'ny governemanta Azerbaijani :
Valifaty atao aminy noho ny asa nataony amin'ny maha-mpiaro ny zon'olombelona azy ny fisamborana an'i Rasul Jafarov, mpanorina ny Human Rights Club (HRC) sady mpandrindra ny fanentanana momba ny zon'olombelona tamin'ilay fifaninanan-kira Eurovision 2012 nampiantranoin'i Azerbaijan. Tsy nomena fahalalahana mifandraika amin'ny ezaka ataony hampiatra ny zony haneho hevitra malalaka sy hanana fikambanana i Rasul Jafarov, hoy ny Amnesty International tao anaty fanambaràna iray.
Tsipihan'ilay fanambaràna ihany koa fa efa ela no miatrika fanaovana antsojay sy faneriterena ireo tsy miankina mpiaro zon'olombelona sy mpomba ny demaokrasia ao Azerbaijan. Ny fandàvana tsy hanoratra ny ONG misy azy ho anaty lisitra dia mahatonga ireo mpitarika azy ireny tsy hanana safidy afa-tsy ny miasa ivelan'ny rafitra henjana voafaritry ny lalàna, izay aty aoriana dia ampiasain'ny manampahefana ho toy ny anton'ny fanenjehana azy ireny ho manao heloka bevava. Olona fahadimy iharan'ny fanenjehana amin'ireo lafiny ireo i Rasul Jafarov tato anatin'ny efatra volana farany.
Ny 7 Aogositra dia nisy hetsika Facebook natomboka ary nanasàna ny olona handefa boky iray avy mba ho fanomezana ho azy noho ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany:
Samy manana eritreritra sy tetika avy isika rehetra mikasika izay fomba tiantsika hankalazàna ny faha-30 taonantsika. Tsy misy amintsika maniry ny hankalaza faha-30 taona any am-ponja toy ny gadra noho ny politika [iray]
Emin Mili, Azeri iray mpanoratra, bilaogera ary mpikatroka mafàna fo, izay gadra noho ny politika ihany koa nanomboka ny 2009 hatramin'ny 2010, dia nanoso-kevitra ny handefasana boky ho an'i Rasul […] “Mamadika ny fonja ho paradisan'ny vakiteny ny boky alefa any am-ponja,” – hoy i Emin.
Azonareo arahana ihany koa ny ‘pejy Facebook Free Rasul Jafarov!’ ho an'ireo fanavaozana vaovao mikasitra ity raharaha ity [az, en].